प्रा.डा. रवि शाक्य
स्वास्थ्य मन्त्रालयले USAID भन्ने INGO सँग मिलेर १२ वर्षअघि मातृ मृत्युदर बारे गरेको एक अनुसन्धानको नतिजाले सबैलाई झस्काएको थियो । मर्ने आमाहरू मध्ये १६ प्रतिशतले आत्महत्याबाट ज्यान गुमाएका थिए । कुपोषण, सङ्क्रमण, कमजोर स्वास्थ्यसेवा पूर्वाधार आदि मात्र सधैँ प्राथमिकता दिँदै आएको नेपाली समाजका लागि यो पूर्णतया अनपेक्षित थियो नै ।
आत्महत्या र मानसिक रोग (विशेष गरी डिप्रेसन) बिच ठुलो एवम् सोझो सम्बन्ध रहने गर्छ । सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुँदाहुँदै पनि आजसम्म पनि यो पक्षलाई सरकारी वा जनसाधाणका तहमा खासै सम्बोधन हुन सकेका छैन । यसलाई मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको व्याप्त असंवेदनशिलता एवम् गलत धारणालाई दोष दिने ठाउँ प्रशस्तै होलान् । यसर्थ थुप्रै सुत्केरी आमाहरूलाई प्रायः हुने मानसिक समस्या पोस्ट पार्टम डिप्रेसन र आत्महत्या बारे प्रसङ्ग गाँस्नु सान्दर्भिक नै होला ।
के हो पोस्ट पार्टम डिप्रेसन ?
रमाइलो वातावरणमा खुसी र नरमाइलोमा उदास हुनु स्वाभाविक हो । प्राय जो कोही खुसी हुने वातावरण वा विगतका आफ्ना रुचिमा पनि पटक्कै खुसी हुन नसक्ने गरी लगातार २ हप्ता वा बढी दुखी मात्रै हुने, काम काज बिग्रने गरी अरू विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक लक्षण देखिने, भावनाको गडबडी (mood disorder) निराशपना आदि मनोरोग (डिप्रेसन) हो ।
खुसी र उदास सहनुलाई बिजुली बत्ती बल्नु र निभ्नुसँग दाँज्ने हो भने डिप्रेसन स्विच बिग्रेको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ । जति स्विच ON गर्दा नि निभेको निभै । आजकालको कम्प्युटर भाषामा भन्ने हो भने दिमाग (कम्प्युटर) मा खुसी हुने apps बिग्रेको अवस्था डिप्रेसन हो ।
सुत्केरी अवस्थामा हुने उस्तै निराशपनालाई पोस्ट पार्टम डिप्रेसन भनिन्छ । सबै सुत्केरीहरूलाई डिप्रेसन भइहाल्दैन । कतिपय महिलालाई बच्चा जन्माएको केही दिनभित्र बच्चा कसरी हुर्काउने भनी अत्तालिने, सजिलै भावुक हुने, निन्द्रा भोक गडबड हुने लक्षण आउन सक्छ । यो अवस्था, बिना professional help, घरपरिवारले मात्र हौसला दिँदा पनि २ हप्ता भित्र सबै लक्षण हराउँछन् भने यो डिप्रेसन नभई post partum blues मात्र हो ।
पोस्ट पार्टम डिप्रेसन कसरी चिन्ने ?
लगातार उदास मात्र हुनु, कुनै कुरामा पनि खुसी नहुनु डिप्रेसनका प्रमुख लक्षण हुन । साथसाथै अकारण थकान हुनु, निरन्तर नकारात्मक विचार मात्र (आफू, वातावरण एवम् भविष्यबारे) आइरहनु, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमतामा कमी हुनु, आफू वा आफ्ना बच्चा बारे अस्वाभाविक चिन्ता वा शङ्का हुनु, पटक्कै ध्यान नदिनु वा आफैँ हानि नोक्सानी पुर्‍याउने सोच योजना बनाउनु वा कोसिस गर्नु, निन्द्रा भोक गडबड हुनु आदि विभिन्न लक्षणहरू पनि हुन सक्छन् ।
कतिलाई हुन्छ ?
नेपालमा गरिएका विभिन्न अनुसन्धानमा करिब समस्त सुत्केरीका करिब पाँच अंश (२० प्रतिशत) मा यो रोग हुने आकलन छ ।
कुनै पनि मानसिक रोग झैँ पोस्ट पार्टम डिप्रेसनको पनि किटेरै फलाना कारण भन्ने अझै पनि ज्ञान उपलब्ध छैन । विश्वव्यापी मान्य सिद्धान्त जैविक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक जोखिम सिद्धान्त (bio-psycho-social model) ले नै यसको कारण व्याख्या गर्नु पर्ने हुन्छ । जैविक कारण विशेषतः वंशाणु र सुत्केरीमा उथलपुथल हुने थाईराईड हर्मोन (hormones) हरुले विशेष ध्यानाकर्षण पाएका छन् ।
उपचार गर्दा वा नगर्दा के हुन्छ ?
सही उपचार पाएमा १ देखि २ महिनामा सुत्केरीका निराशपना निको हुने गर्दछ । ८० प्रतिशत डिप्रेसन उपचार नगर्दा पनि ६ महिना देखि १ वर्ष भित्र आफै ठिक भएर जान्छ । तर उपचार नगर्नु साहै ठुलो मूल्य चुकाउन पर्ने हुनसक्छ । १५ देखि २० प्रतिशत त साँच्चिकै आत्महत्या गरेर मर्दछन् । त्यसमध्ये केहीले त आफ्नै बच्चालाई पनि हानि नोक्सानी पुर्‍याउने तथा मार्नेसम्म पनि हुनसक्छ ।
बेलाबेला समाचारमा सुनिने आमाले दुधे बालक सहित नदी, इनारमा फाल हालेको यही रोगले गर्दा हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । बिरामी र बच्चा नमर्दा पनि बच्चालाई आमाले बेवास्ता गर्दा उसको हुर्काई-विकास, बिरामीका सामाजिक र व्यावसायिक जीवनमा उथलपुथल पक्का हुने गर्दछ ।
उपचार के के छन् ?
बिरामीका अवस्था हेरी मनोहिृपक औषधोपचार, मनोचिकित्सा र आवश्यक पर्दा विद्युतीय कम्पन उपचार (Electroconvulsive Therapy) एकल वा सबैसाथ पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा पनि यस रोगका उपचार एवम् विशेषज्ञ उपलब्ध छन् । तर कम सचेतना, अन्धविश्वास, लाञ्छनाका डर (स्वास्थ्यकर्मीमा पनि) एवम् न्यून पहुँच, सेवा सुविधा आदि कारणले गर्दा यो थोरै मात्र निदान तथा उपचार हुन गरेको छ ।
आत्महत्या डिप्रेसन तनाव मानसिक रोग सुत्केरी
निर्देशक, पाटन अस्पताल, ललितपुर